I-Hoover H-isihlambululi i-700, uphononongo lwale ndawo yokucoca umoya | Iindaba zeGajethi
I-Hoover H-isihlambululi i-700, uphononongo lwento enkulu yokucoca umoya
UMiguel Hernandez | 05/06/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 27/05/2021 21:24 | ngokubanzi, Reviews
Izinto zokucoca umoya ziyimveliso eya isiba ngakumbi nangakumbi, ngakumbi ngeli xesha xa ipollen iba lutshaba olunye lwabemi belungu. Kukwenzeka okufanayo xa sithetha ngezixeko ezikhulu, apho ungcoliseko lunokuvelisa amanqanaba eegesi emakhayeni angafanelekanga kubomi bemihla ngemihla kwaye anokubangela izifo.
Kutshanje sihlalutye ezinye iindlela kwiActualidad Gadget, kwaye namhlanje sizisa I-Hoover H-isihlambululi i-700, isicoci somoya esinobukhulu obukhulu kwaye kubandakanya isihluzi phakathi kwezinye izibonelelo. Fumanisa kuthi amanqaku ayo aphambili, kwaye kunjalo nobuthathaka bawo.
2 Iimpawu zobugcisa kunye nokucoca
3 Sebenzisa kunye neemowudi
4 Ukongezwa kunye noluvo lomhleli
IHoover yinkampani yendabuko, oya kuthi uyikhumbule ngempumelelo yayo enkulu yokucoca izinto zokucoca ngaphambili. Okwangoku uluhlu lwayo lweemveliso luhlaziyiwe kakhulu, phakathi kwazo sifumana ifayile ye- Umcoci H, Isicoci somoya esimi nkqo ngokuthe nkqo kunye ne-quasi-cylindrical. Indawo engezantsi yeyokucoca igril yokutsala ngombala wesilivere, kuba iplastiki. Kwenzeka into efanayo nakwinxalenye ephezulu, iplastiki emhlophe apho sifumana khona izibambo ezibuyisekayo zothutho, iinkcukacha zomsebenzi kunye nendawo ephezulu, apho kwenzeka khona umlingo.
Imibala: Isilivere / isilivere + emhlophe
Ubunzima: 9,6 Kg
Ubungakanani: I-745 * 317 * 280
Lo mmandla ungaphezulu unegridi yokucoca umoya kwaye iphaneli yokulawula ene-setyhula ye-LED eya kubonisa imeko. Sinemisebenzi eyahlukeneyo kule paneli yethinta esiza kuthetha ngayo kamva. Icandelo elingasemva lishiywe ngengqikelelo kunye nesiciko sokucoca ulwelo. Xa uyisusa, Siza kufumana inkqubo yokuqokelela intambo eyayixabisekileyo, nangona ewe, siphose intambo enkulu kakhulu ithathela ingqalelo uhlobo lwemveliso esijongana nayo. Njengoko ine-reel ezenzekelayo, intambo ayinakubuyiselwa enye inde.
Iimpawu zobugcisa kunye nokucoca
Le Hoover H-isihlambululi 700 inempawu zonxibelelwano lweWiFi kunye neBluetooth ngendlela edibeneyo yokusetyenziswa kwesicelo, into eyothusayo ngenxa yokuguquguquka kwayo. Inesivamvo sokulumkisa amaqondo aphezulu e-carbon dioxide, kunye neqondo lobushushu kunye ne-humidity sensor, into exatyiswayo ngokujonga indawo ekuyo imveliso kunye nokuba lubaluleke kangakanani olu hlobo lwedatha ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla. Kwelinye icala, sine-2,5 kunye ne-10 nm sensor yamasuntswana. Ngokwam, Ndicinga ukuba le ine-PM 2,5 ibinokwanela.
Ixabiso lokucoca: 59 euro
Ngaphezulu sinomboniso oya kuthi usazise ngomgangatho womoya ngexesha lokwenyani. Sinezilumkiso ngokugcinwa kweefilitha, esiza kuthetha ngazo apha ngezantsi. Sinezinto ezintathu zokucoca ulwelo ngecebo lokucoca ulwelo elinokuhlanjwa langaphandle, Isihluzo seHera H13 kunye nefilitha esebenzayo yekhabhoni oko kuyasivumela ukuba siqhubeke nokungasebenzi komungu, ngakumbi okunomdla kubantu abanengxaki yokungezwani komzimba. Ke, esi sixhobo sifanelwe ukuba sibe nendawo efanelekileyo ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-110, siye sayivavanya kwizithuba ezimalunga ne-55 yeemitha zesikwere. Inokupheliswa kwe-VOC kwaye ubuninzi beemitha ze-cubic ngeyure ziya kuba ngama-330, ukususa 99,97% yamasuntswana ocoliweyo.
Sebenzisa kunye neemowudi
IHoover H-isihlambululi 700, onokuyithenga kwiAmazon, Inemowudi ezintathu ezisisiseko: Ubusuku, i-Auto kunye neMaximum, eya kuthi iqulunqwe ngepaneli yokuthinta kunye nokusetyenziswa. Nangona kunjalo, Siza kuba ne-humidifier kunye ne-aroma diffuser, esinokuthi siyizalise kunye neemveliso ezifakwe kwiphakheji. Yinto enomdla yokongeza kwisicocisi esingekho kangako kwizicoci zomoya eziphezulu eziphezulu, ke yinto eyongezelelweyo.
Khuphela usetyenziso lwakudala lweHoover
Khuphela i-app entsha yeHoover
Kwinxalenye yayo, ngokusebenzisa sicelo Singaqwalasela isihlambululi se-H ukuba siyisebenzise ngokusebenzisa abancedisi abathandwayo abathandwayo, esithetha ngaso IAmazon's Alexa kunye noMncedisi kaGoogle. Kuzo zombini iimeko, iya kudityaniswa kuluhlu lwethu lwezixhobo kwaye iya kusivumela ukuba sicime isixhobo kwaye sicime ngokuthanda, kunye nenkqubo yokusebenza ngaphaya kwesicelo esinikezwe nguHoover ngokwakhe. Isicelo sinokuphuculwa, sinonxibelelwano lomsebenzisi olusikhumbuza uninzi lweemveliso ezibalaseleyo ezivela kwimvelaphi yaseAsia, nangona kunjalo, iyakwenza oko ikuthembisayo.
Ukongezwa kunye noluvo lomhleli
Sinayo kwi-H-Purifier 700 kuluhlu lwe-H-Essence, Olu luthotho lweebhotile ezincinci zeoyile ezifanelekileyo eziza kubekwa ngokuthe ngqo, kunye nebhotile kwindawo yokuhambisa. Oku kuthetha ukuba kwithiyori sinokusebenzisa kuphela iioyile ezifanelekileyo zeHoover kuba ibhotile ingena kwisixhobo. Nangona kunjalo, inyani kukuba ungayigcwalisa le bhotile ukuba unqwenela ngeoyile yomntu wesithathu, into endikucebisa ngayo ukugcina iindleko. Oku akunjalo ngesihluzo, esibonakala ngathi sisomnini ngokupheleleyo, kodwa asikucebisi ukukrwela, ngakumbi kule meko kuba ixabiso liyafikeleleka xa kuthelekiswa neentshaba ezisemarikeni. Sine-H-Biotics, uluhlu lwezinto zokubulala iintsholongwane kunye neprobiotic ezifakwe kwi-dispenser.
Ukuhamba komoya ithiyori 360º, Nangona kunjalo, abenzi boluvo bandinike ukalisho olwahluke kancinane kunezinye iimveliso eziphezulu kakhulu. Umbhobho womoya ocociweyo awubonakali unamandla njengoko kunokulindelwa kwimveliso ethembisa ukuya kuma-300 eemitha zekyubhi ngeyure, ukongeza, oku kuya kuphazamisa ukuthula, okuthi ngesantya esiphantsi kwamkelwe, kodwa kwimowudi yasebusuku kangangoko bendilindele. Kubantu abanobunzima bokulala bengxola, uMcoci H uya kufuna ukucinywa. Oku kuye kwaba ngamava ethu nge-H-Purifier 700.
Lo mcoci-H usinika enye indlela ngexabiso elingelide kakhulu, elingakhange lisindise kwizongezo ezinje nge-humidifier, ii-sensors okanye i-dispenser ye-essence, kodwa kwiinkcukacha ezithile ihlala linyathelo elingaphantsi kwezinye izinto zokucoca eziphezulu njengeDyson okanye uPhilips. Nangona kunjalo, umahluko wamaxabiso udume kakubi kwaye usinika namandla angaphezulu. Eyona nto imbi kakhulu kumava ethu sisicelo, ubuncinci kuhlobo lwaso lwe-iOS. Unokufumana i-H-purifier 700 ukusuka kwi-479 euro kwiAmazon.
Ithunyelwe nge: 5 Juni ka 2021
Utshintsho lokugqibela: Meyi 27 ye2021
Unxibelelwano kunye neapp
Inani elikhulu leenzwa
Intambo emfutshane ngokuthelekisa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Hoover H-isihlambululi i-700, uphononongo lwento enkulu yokucoca umoya
Yealink UVC20, iqabane elilungileyo ekusebenzeni ngomnxeba [Ukuphonononga]
I-Huawei Bukela i-3 kunye ne-FreeBuds 4, ukubheja kwisiphelo esiphakamileyo kwizinto zokunxiba